ट्राफिक प्रहरीका घोडा: आकृति, सुजाता र आशिशलाई भ्याइनभ्याइ, ७ बुज्रुक तबेलामा ! [भिडियोसहित]
ट्राफिक प्रहरीसँग रहेका ११ वटा घोडामध्ये हाल ३ वटाले काम गरिरहेको पाइएको छ । ७ वटा घोडा बुढो भएर तबेलामा थन्किँदा एउटा घोडा घाइते अवस्थामा छ ।
नेपाल प्रहरीले केही वर्षअगाडि नेपाली सेनाबाट ल्याएका घोडामध्ये ३ वटा भने मरिसकेका छन् ।
आफूहरूसँग रहेका ११ घोडामध्ये ३ वटाले मात्र ड्यूटी गरिरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीमदत्त ढकालले बताए ।
‘हामीसँग ११ वटा घोडा छन्, जसमध्ये अहिले ३ वटाले मात्र काम गरिरहेका छन्,’ एसएसपी ढकालले भने ।
११ मध्ये ६ घोडी र ५ घोडा छन् । आकृति, सुजाता, ललिता, पार्वती, रोजिना, अस्मिता नामका ६ वटा घोडी तथा हेमन्ते, आशिश (ठूलो), आशिश (सानो), स्पार्क र कल्प गरी ५ वटा घोडा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा माताहत छन् ।
आकृति, सुजाता र आशिश (ठूलो)ले काम गरिरहेका छन् । ललिता खुट्टाको चोटका कारण आराम गरिरहेकी छन् भने अन्य घोडा तथा घोडी बुढो भएर तबेलामा थन्किएका माउन्टेन प्रहरी घोडा तथा घोडी शाखा प्रमुख प्रहरी साहयक निरीक्षक (असई) सोमबहादुर भुजेलले बताए ।
‘हामीसँग रहेका धेरैजसो घोडा बुढा भएका छन्, आकृति, सुजाता र आशिश मात्र अहिले नियमित ड्यूटीमा जान्छन्, ललिताको खुट्टामा चोट छ,’ असई भुजेलले लोकान्तरसँग भने ।
ड्यूटीमा खटिन सक्ने घोडालाई भीड व्यवस्थापन र लेन अनुशासन पालना गराउने कामका लागि परिचालन गर्ने गरिएको एसएसपी ढकालले बताए ।
ढकालका अनुसार लेन अनुशासन पालना गराउनका लागि दैनिक दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म वीर अस्पतालअगाडि २ वटा र भोटाहिटीअगाडि भीड व्यवस्थापनका लागि एउटा घोडा खटिने गरेका छन् ।
तलबी स्केलमा खाना
ट्राफिक प्रहरीमा रहेका ११ वटा घोडालाई स्केलमा दैनिक खाना दिइन्छ । प्रत्येक घोडालाई साउनदेखि कात्तिकसम्म ५ सय ३४ रुपैयाँ र मंसिरदेखि असारसम्म ६ सय ६४ रुपँयाको दाना उपलब्ध गराउने गरिएको एसएसपी ढकालले बताए ।
घोडालाई प्रत्येक दिन साढे २ केजी चना, साढे १ केजी जौ, १ केजी चोकर, ४२ ग्राम नुन, सुकेको घाँस १८ केजी, ९ सय ८ ग्राम सोत्तर, १७६ ग्राम आलस र हरियो घाँस हुने समयमा हरियो घाँस दिने स्केल रहेको माउन्टेन घोडा तथा घोडी शाखाका असई भुजेलले लोकान्तरलाई बताए ।
‘घोडालाई दिने दैनिक तालिका छ, हामीले त्यो तालिकालाई फलो गरेका छौं र सरकारी स्केल पनि त्यही हो,’ असई भुजेलले लोकान्तरसँग भने ।
घोडाहरूलाई दिनमा ६ पटक १० लिटरका दरले पानी दिइन्छ । बिहान पराल, दिउँसो घाँस, बेलुका घाँससँगै बिहान, साँझ र बेलुका दाना दिने गरिएको छ ।
बिरामी भएको खण्डमा नेपाल प्रहरीमा रहेका पशुपंक्षी डाक्टरले उपचार गर्ने गर्छन्, सानातिना उपचार घोडा हेरचाह गर्दै आएका प्रहरी कर्मचारीबाटै हुँदै आएको छ ।
घोडा हेरचाहका लागि असई भुजेलको कमान्डामा २३ जना प्रहरीहरू खटिँदै आएका छन् ।
काम गर्न नसक्ने घोडाका लागि महिनाकै डेढ लाख खर्च !
ट्राफिक प्रहरीसँग रहेका ११ घोडामध्ये ८ वटा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । एउटा घोडाका लागि मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ औसतमा खर्च हुने गरेको छ ।
ती घोडाका लागि महिनाको करीब १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
घोडा शाखाले थप १० वटा घोडा माग गर्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ, तर जवाफ आएको छैन ।
‘हामीले नयाँ १० वटा घोडा थप्न सम्बन्धित नियकालयलाई चिट्ठी पनि पठाइसकेका छौं, अहिलेसम्म जावफ आएको छैन,’ असई भुजेलले भने, ‘यदि हटाउने भए सबै हटाए हुन्थ्यो, होइन भने व्यवस्थापन राम्रोसँग भए हुन्थ्यो ।’
तर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी ढकाल भने प्रविधिको विकाससँगै ट्राफिक व्यवस्थापनको शैली पनि परिर्वतन भएकाले विस्तारै घोडाको प्रयोगलाई कम गर्दै लैजाने नीति रहेको बताउँछन् ।
फोटो/भिडियो : रोजन श्रेष्ठ